तल्लो दर्जालाई कार्बाही गर्दै आफै कमिसन उठाउँदै डीआईजी रञ्जीतकार, एकैजनासंग ६ लाख माग
पत्र पत्रिका प्रकाशित: २०७८-६-५ गते १०६० पटक हेरिएको
नागरिकको सुरक्षामा अहोरात्र खटिने देशका सुरक्षाकर्मीहरु आफैँ पछिल्लो समयमा तस्करी तथा दुई नम्बर धन्दामा लागेपछि नागरिकहरुले आफुहरु असुरक्षित रहेको महसुस गर्न थालेका छन् । अपराध,हिंसा,लागु औषध दुव्र्यसनी,साईवर क्राईम,बालबिबाह,बहुबिबाह,मानव वेचविखन,चोरी,डकैती,अत्या,अपहरण,गाली,वैइजेती तथा गैर कानुनी कार्य नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने सुरक्षाकर्मीहरु नै यस्ता गतिविधिहरुमा लागेपछि नागरिकहरु ससंकित हुनु पनि अनौठो नहोला ।
त्यस्ता कार्यमा प्रदेश नम्बर २ प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) उमेश रञ्जीतकार पनि संग्लग्न भएको पाइएको छ ।डिआईजी रञ्जीतकारले खटाएकी महिलाले पीडितसँग बार्गेनिङ गरेको अडिओ फेला परेपछि उहाँको इमान्दारीताको पर्दाफाँस भएको छ ।
रौतहटको गरुडास्थित नेपाल पुलिस स्कुलमा खाली रहेको शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति दिलाइ दिने भन्दै डीआईजी रञ्जीतकारको नाम लिँदै ति महिलाले पैसामा बार्गेनिङ गरेकी अडियोमा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
हामीलाई प्राप्त अडिओेमा सर्लाहीकी सुशीला थापा (दाहाल)ले पर्सा मणिपुरका उदासकुमार पाण्डेसँग रु ६ लाख बार्गेनिङ गरेको सुन्न सकिन्छ । अडिओमा दाहालले पाण्डेसँग पैसाको बार्गेनिङ गर्दा सोचेको भन्दा बढी डिमाण्ड भएको बताएकी छिन्।
दाहालले रु ६ लाख भन्दा कम रकममा कुरा नमिल्ने बताउँदै ३ जना मिलेर काम गरिदिने बताएकी छिन्। दाहालका अनुसार पैसा पाएपछि पुलिस स्कुलका प्रिन्सिपल, डीआईजी र अर्का एक व्यक्ति मिलेर पाण्डेलाई स्थायी गरिदिने बुझिएको छ ।
पाण्डेसँग कुराकानी हुँदै गर्दाका बखत डीआईजी रञ्जीतकारले आफूलाई फोन गरेको भन्दै दाहालले फोन समेत काटि दिएकी छिन् । जतिबेला दाहालले भनेकी छन्, । ‘ए ल ल । उमेश, क्यारे ऊ–ऊ रञ्जीत, डीआईजीसा’पले नै फोन गर्नुभयो। ल ।’
त्यसपछि पाण्डेले दाहाललाई फोन गर्दै बैंकमा राखेको भौचर फेसबुक म्यासेन्जरमा पठाईदिने बताएका छन्। दाहालले बैंकमा पैसा कुर्दै गर्दाखेरी पाण्डेले रौतहटको कुनै होटलमा खाजा खाएमा आफूले भनिदिने समेत बताएका छन्। बैंकमा काम ढिलो भएको जनाउँदै पाण्डेले दाहाललाई फोन गरेपछि छिटो काम गर्नका लागि बैंक म्यानेजरलाई भनिदिने समेत अडिओेमा सुन्न सकिन्छ। यी माथिका वार्तालापको अडिओे डीआईजीसँग जोडिएकी महिला र पीडितबीचको हो ।
यस्तो छ दाहाल र पाण्डेबीचको फोन संवाद
सुशीलाः हजुर, कहाँ छौं तिमी?
उदासः म गाउँमा छु हजुर ।
सुशीलाः ए त्यो अहिले कुरो भयो होईन। तिमीले सोचेको भन्दा अली बेसी डिमाण्ड छ के गर्ने ?
उदासः हुन्छ कुरा गर्दीनु न थाई भयो भने जागिर भयोे भने भैगोनी
सुशीलाः अं,त्यहि ६ भन्दा घटिमा काम नगर्ने रे उनिहरु तीनजना मिलेर काम गर्ने रहेछन् । प्रिन्सिपल,डिआईजी र अर्काे खै को भन्दै हुनुहुन्थ्यो । मत अघि आमा विरामी भएर हस्पीटल गएँको थिए । अनि त्यहि भन्नु भयो ५÷६ भन्दा घटीमा म काम गर्दीन भन्नु भयो । डाइरेक्टै
उदास ः य,ल ओके गर्नुस । काम गर्नुस थाई गर्दीन्छ ?
सुशीला ः अं अं अं अं
उदास ः ल उ गर्नुस म गर्छु ।
सुशीला ः ए ललल
उदास ः ल उमेश केरे,उमेश केरे रन्जी,डिआईजी सापले फोन गर्नु भयो ।
सुशीलाः ए ल ल। उमेश, क्यारे ऊ ऊ रञ्जीत, डिआईजीसा’पले नै फोन गर्नुभयो। ल
उदासः ल ल ।
अडियो सुरक्षित छ ।
पीडित पाण्डेसँग पैसा माग्नुको कारण के ? अझै खुल्दै जाला ।
पाण्डे विगत पाँच वर्षदेखि रौतहटको गरुडास्थित पुलिस स्कुलमा करारमा अध्यापन गर्दै आएका थिए । चैत १६ मा शिक्षक पदपूर्तिका लागि भएको परिक्षापछि पाण्डेले लिखितमा नाम निकाले। जतिबेला आफू एक्लैको नाम निस्किएको पाण्डेको दाबी छ ।
स्थायी नियुक्तिका लागि लिखितमा नाम निस्किएपछि पाण्डेले अन्तर्वार्ता दिए। पाण्डेको अन्तर्वार्ता लिनेमा प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) छेदिलाल कामती, प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) द्वय सुरेश अधिकारी र राजन ढकाल थिए। इन्सपेक्टर ढकाल पुलिस स्कुलका समादेशक समेत हुन्।
पाँचवर्षदेखि लगातार रुपमा सोही विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका एक्ला उम्मेदवार पाण्डेलाई विद्यालयका प्रिन्सिपल सिताराम भट्टराईको योजनामा अन्तर्वार्तामा फालियो। उनलाई अन्तर्वार्तामा अयोग्य सावित गर्नका लागि प्रिन्सिपल भट्टराईले प्रहरीसँगको मिलेमतोमा अनेक प्रपञ्च रचेको स्रोत बताउँछ।
त्यसपछि प्रहरी र प्रिन्सिपलको मिलेमतोमा अन्तरवार्तामा फालिएका पाण्डे कानुनी लडाईंको लागि लड्न काठमाडौं आए। सहयोगको आशासहित काठमाडौं आएका पाण्डेले कहिँकतैबाट सहयोग नपाएपछि गृह प्रवक्ता फणिन्द्र पोखरेललाई घटनाबारे जानकारी गराए।
तत्कालै गृह प्रवक्ता पोखरेलले ठाडो आदेश दिँदै डीआईजी रन्जितकारलाई घटनाबारे बुझ्न निर्देशन दिए। त्यतिमात्र होइन, गृह प्रवक्ता पोख्रलले घटनाबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत परिपत्र गरे। गृहको परिपत्रपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न निर्देशन दियो।
गृहमन्त्रालय र प्रधान कार्यालयबाट आफूलाई सत्यतथ्य बुझ्न निर्देशन आएपछि डीआईजी रन्जितकार पाण्डेसँग झनै रुष्ट भए। गृह प्रवक्ता र प्रधान कार्यालयको निर्देशनपछि डीआईजी रञ्जीतकारले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका तत्कालिन प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक(डिएसपी) रवि रावलको संयोजकत्वमा, इन्सपेक्टर राजाराम केसी र प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) सदस्य रहनेगरी ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरे।
त्यतिमात्र होइन यता संघीय प्रहरी ईकाई प्रहरी कार्यालय, जनकपुरले समेत छानबिन समिति गठन गर्यो। संघीय प्रहरी कार्यालयका इन्सपेक्टर चण्डेश्वर यादवको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासनको एकजना प्रतिनिधिसहित छानबिन समिति गठन भएको थियो। छानबिनको म्याद सकिएपछि दुवै समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘पुनः अन्तरवार्ता लिएर पाण्डेलाई जागिरमा जोड्नु र अन्तरवार्ता लिनेहरुलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु’ भनिएको थियो। तर, डीआईजी रन्जितकारले समितिको प्रतिवेदनको धज्जी उडाउँदै उल्टो १ साउनमा पाण्डेलाई जागिरबाट निकाले।
त्यसपछि २७ भदौ २०७८ मा स्कुलको होस्टेलमा बस्दै आएका पाण्डेलाई विद्यालय प्रशासनले ‘होस्टेल खाली गरिदिने सम्बन्धमा’ पत्र काट्यो। ‘यस विद्यालयको निमावि करार शिक्षकको रुपमा कार्यरत रहँदा यस विद्यालयको छात्राबासको घर, कोठा प्रयोग गरि बसिराख्नु भएकोमा हाल तपाईं कार्यरत नरहेकाले उक्त कोठामा ताल्चा चाबी लगाइएको हुँदा तपाईले उक्त कोठाबाट आप्mनो सरसामान झिकि कोठा खालि गरिदिनुहुन अनुरोध गरिएको छ,’ समादेशक राजन ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ।